STEETI ENUGU NỌ N’AKA CHUKWU EBE MỌNỊKA UGWUANYỊ NỌ N’ỌRỤ – hoo!haa!!
STEETI ENUGU NỌ N’AKA CHUKWU EBE MỌNỊKA UGWUANYỊ NỌ N’ỌRỤ
I lee anya n’ala anyị niile gbaa gburu gburu, ị ga-ahụta na isi ọgọdọ adịzịghị ebe ekedoro ya na mbụ.
Ọbụ nke a mere nwunye aka na-achị steeti Enugu bụ Oriakụ Mọnịka Ugochi Ugwuanyị jiri site n’ime ala obi ebere ya chọọ ma malite inyere ndi ụwa na-atụ n’ọnụ aka na steeti Enugu.
N’isi nso a, Oriakụ Ugwuanyị gara njem ile ndi mmadụ ahụ ma nyekwa ha ọgwụ n’ụdị ime ka ahụike ndi inyom bụrụ igba ma nyekwa ha ike na ume ịrụ ọrụ dịrị ha. Njem ahụike otu ụbọchị a bụ na Nsụka ka o mere ya.
Njem ọrụ ahụike a bụ nke were Oriakụ Ugwuanyị otu ụbọchị ka anọrọ n’ogige ụlọ akwụkwọ Township Primary School dị na ncherita ihu ụlọ akụ nke ndi Aksesị mee.
Njem a lebara anya ma lekwa ndi mmadụ ahụ na-akwụghị ụgwọ. Oriakụ Ugwuanyị nyekwara onyinye ọtụtụ ihe eji elekọta ụmụaka anya, ihe ndi eji enyere ndi ọlụsị aka nakwa ihe inyere ụmụ nwanyị aka n’ọrụ dị iche iche dịka ụgbọ nkwa n’aka bụ wheel barrow, igwe ụmụ nwanyị ji acha isi ọkụ, afere eji akwọ aka, igwe eji akwọ ihe nri, ihe ntụ-oyi mpa n’aka maọbụ cooler, akpa osikapa, akarama nri ụmụaka, igbe nri ndomiga nakwa ihe ndi ọzọ.
Agwakwara ndi mmadụ okwu ka ha were nwee ike ịma ka-esi etinye ihe nrite ha ndi a n’ọrụ maka ịkwalite ọnọdụ akụ n’ụba nakwa ahụike ha.
Oriakụ ugwanyị gwara ndi inyom ka ha gbaa mbọ ibagide ụmụ obere ọrụ achụm nta ego iji na-enyere ndi di ha aka n’ezi n’ụlọ. Oriakụ Ugwuanyị sịrị na nke a dị mkpa ebe ọ bụ na nsogbu ichọ nri ezi n’ụlọ na-atụnyezi ndi ikom (ndi di) ntụ n’anya.
Previous Post: HEI!! ONYE NWỤRỤ ANWỤ NA-AGA IJE!!!
Next Post: OKE IHE MBEREDE ỤGBỌALA ATAALA ISI MMADỤ N’ENUGWU